Friday August 21, 2015 - 22:34:21 in Wararka by Web Admin
Shacabka kunool xarunta degmada Warsheekh ee gobolka Shabeelada dhexe ayaa marki ugu horeysay taariikhda waxey sitoos ah usoo doorteen gudoomiyayaasha afarta Waax ee ka koobantahay xarunta degmada Warsheekh.
Gudoomiyaha Degmada Warsheekh Col.Axmed Xuseen Axmed (Shiidka) iyo howlwadeenada kale ee maamulka degmada ayaa goob joog ka ahaa halka doorashada ka dhaceysay iyadoo lagu tartan siiyay halkaasi muwaadiniin reer Warsheekh ah.
Magacyada Waaxaha lagu tartamaayay.
1. Waaxda Sheikh Cabdi
2. Waaxda Umulkheyr
3. Waaxda Beder
4. Waaxda Iftin
Gudoomiyayaasha waaxaha ayaa waxaa doorasho qof iyo cod ah ku doortay 21 xildhibaan oo waax walba laga soo xulay 21 xildhbaan kuwaas oo wadartoodu tahay 84 xlidhibaan
Doorashada ayaa udhacday si fiican waxaan ku tartamayay waaxda Shiikh Cabdi Musharixiinta kala Axmed Sh Maxamed Sh Axmed ( Sh Axmadey Sh Maxaadow ) iyo Maxamed Xuseen Suufi waxaana codadka ay u kala heleen 19 cod uu helay Axmed Sh Maxamed Sh Axmed ( Sh Axmadey Sh Maxaadow ) halka Maxamed Xuseen Suufi uu helay 2 cod waxaana gudoomiyaha Waaxda Sheekh Cabdi cod aqlabiyad leh loogu doortay Axmed Sh Maxamed Sh Axmed ( Sh Axmadey Sh Maxaadow )
Waaxda labaad ee Umulkheyr ayaa iyadana waxaa ku tartamay musharixiinta kala Asad Sayid Maxamud iyo Maxamed Nuur Macalim waxaan codadka aya u kala heleen 17 Asad Sayid maxamud halka Maxamed Nuur Macalim uu Helay 3 halka 1 cod uu halaabay waxaana sidaas loogu doortay Gudoomiyaha Waaxda Umulkheyr Asad Sayid Maxamud Sh Cabdi.
Waaxda Sadaxaad oo aad u adkeyd ayaa waxaa musharaxiinta ay kala ahaayeen C/raxmaan Cabdiraxman Maxamed Maxamud iyo Guuleed Cabdiraxman Maxamed halka Cabduqadir Xuseen Xasan oo ka tanasulay doorashada oo ahaa mid ka mid ah musharixiinta.
Doorashada ayaa waxaa 12 cod helay Cabdiraxman Maxamed Maxamud (Shiikha Cad ) halka Guuleed Cabdiraxman Maxamed ( Galad) uu helay 9 waxaana sidaasi loogu doortay Gudoomiyaha waaxda Beder Cabdiraxman Maxamed Maxamud (Shiikha Cad)
Waaxda afaraad ee Ifin waxaa iyada ku tartamayay Xasan Cali Maxamed iyo Ciideey Axmed Xuseen taas oo uu soo xaadiri waayay musharax Ciideey Axmed Xuseen sidaasna uu ugu guuleystay oo si four Fite ah Gudoomiyaha Waaxda iftin Xasan Cali Maxamed .
Doorashadaani oo noqotay mid taariikhda ugashay shacabka Reer Warsheekh iyadoo arintaani ee suura geliyeen maamulka cusub ee degmada Warsheekh oo uu horkacaayo mudane Col.Axmed Xuseen Axmed (Shiidka) isagoona ubalan qaaday dadka deegaanka in maamulkiisa uu suura gelin doono hanaan maamul oo ku dhisan midnimo iyo cadaalad kaasi oo dadka deegaanka u horseedi doono kalsooni iyo wax wada qabsi.
Xafiiska Shabakada Warsheekh ee gobolka Shabeelada Dhexe.